मोदीजी जोखिम मोल्नुहुन्छ, म पनि जोखिम मोल्छु, हाम्रो ‘केमेस्ट्री’ मिल्छः प्रचण्ड - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
मोदीजी जोखिम मोल्नुहुन्छ, म पनि जोखिम मोल्छु, हाम्रो ‘केमेस्ट्री’ मिल्छः प्रचण्ड
'मोदीजीप्रति मेरो र नेपाली जनताको भरोसा छ, अब विश्वास बलियो बनाउन मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ'
"मलाई लाग्दैन चीन कुनै विचारधारा लिएर चलिरहेको छ। उसको लागि बिजनेस, नाफा र अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण छ। भारतसँग पनि उसको व्यापार दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यसकारण अब विचारधाराको कुनै कुरा छैन। कुरा आफ्नो– आफ्नो राष्ट्रिय हितको हो।"
म प्रष्ट पार्न चाहान्छु– भारतविरुद्ध नेपालबाट कुनै पनि प्रकारको गतिविधि संचालित हुन दिनु हुँदैन।
तपार्इं नेपालमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ। नेपालमा पछिल्लो २५ वर्षमा १८ पटक सरकार फेरबदल भएको छ। राजसंस्थाको अन्त्य भएपछि ९ वर्षमा ८ पटक प्रधानमन्त्री बदलिइसकेको छ। तपाईको लोकतन्त्र के सही बाटोमा गइरहेको छ?
क्रान्तिपछि केही मानिसलाई लागेको थियो, तपाईं दक्षिण एसियाको नेलसन मन्डेला हो। तर त्यस्तो हुन सकेन। कहाँ चुक्नुभयो तपाई?
तपाईं भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यो भ्रमणको उद्देश्य के हो?
भारतसँग विश्वासको बलियो आधार तयार गर्न जरुरी छ। नेपाल–भारतको सम्बन्ध पछिल्लो समय राम्रो भएन। यो अवधिमा आपसी शङ्का र भ्रम धेरै बढ्यो। संविधान घोषणाको समयमा भएको नाकाबन्दीबाट धेरै कठिनाइ भयो। भारत भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य के हो भने दुई देशबीच नयाँ विश्वास बनोस्। त्यसकारण यो भ्रमण 'गुडविल भिजिट' जस्तो रहनेछ। मलाई पूर्ण विश्वास छ की यो भ्रमणले दुबै देशबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउनेछ र ऐतिहासिक हुनेछ।
भारतमा निकै मजबुत सरकार छ। सरकारसँग पूरा बहुमत छ। मोदीजीको आफ्नै स्पष्ट तरिका छ। तपाईंको नजरमा प्रधानमन्त्री मोदी कस्तो नेता हो?
तपाई दुवै देशलाई गहिराइका साथ बुझ्नु हुन्छ। बीचबीचमा कुटनीतिक अप्ठ्याराहरू आउँछन्। यसको प्रमुख कारण के हो?
मोदीजी नेपालमा दोस्रो पटक आउने जुन आशा जागेको थियो, जुन प्रकारको उत्साह थियो, यसलाई हामी दुबै मिलेर कायम राख्नुपर्ने थियो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यहाँबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अब आरोप–प्रत्यारोप होइन, समीक्षा गर्नुपर्छ। यस्तो किन भयो? नेपालको तर्फबाट हो या भारतको तर्फबाट? हामी दुवैजना बसेर तय गर्नेछौं, यस्तो परिस्थिति फेरि नआओस्। यसको लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छ। वातावरण त्यही दिशामा अघि बढिरहेको छ।
मधेसी यसमा बढी असन्तुष्ट भए। तपाईंलाई संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन?
यहाँ आन्दोलन भयो। धेरै मानिसले ज्यान समेत गुमाए। हाम्रा लागि यो निकै दुःखको कुरा हो। के कुरा निकै कम मानिसलाई मात्र थाहा छ भने हामीले संविधानको प्रक्रियामा फरक मत दर्ता गरेका थियौँ। मधेस आन्दोलनप्रति मेरो सहानुभूति स्वभाविकै छ। पहिला म जुन आन्दोलनको संयोजक थिएँ, त्यसमा सीमान्तकृत मानिसहरू पनि संलग्न थिए। त्यसकारण मलाई लाग्छ, मधेसी, थारु जनजातिको माग पूरा गरिनुपर्दछ। भारत जानुअगाडि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने मेरो इच्छा छ, ताकि त्यहाँको भरोसाको माहौल बन्न सकोस्। कोशिस जारी छ। थाहा छैन, त्यतिबेलासम्म हामीले फाइनल गर्न सक्छौं या सक्दैनौं। तर, मेरो इच्छा के छ भने यो काम गरेर भारत जाऊँ अनि अझ राम्रो सन्देश जानेछ।
एक मिडियाका अनुसार तपाईले कुटनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो भ्रमणमाथि शंका नगर्न भन्नु भएको थियो। नेपालमा पटक पटक आशंकाको माहौल किन्न बन्ने गर्छ?
प्रचण्ड र नरेन्द्र मोदी
विचारधारा त तपाईं र मोदीको फरक छ। तपाईंको सैद्धिन्तिक रुझान चीनसँग धेरै मिल्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा चीन कुनै मुद्दा हो?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी जसरी काम गरिरहेका छौं, त्यसमा विचारधारा अगाडि आउँदैन। दुवै देशको सम्बन्ध बलियो गर्नुछ। दुवै छिमेकी देशमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्दछ। मोदीजी पनि केही 'रिस्क' लिएर, परम्पराबाट हटेर केही गर्न चाहनुहुन्छ। म पनि त्यही चाहन्छु। जहाँसम्म चीनको कुरा छ, मलाई लाग्दैन चीन कुनै विचारधारा लिएर चलिरहेको छ। उसको लागि बिजनेस, नाफा र अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण छ। भारतसँग पनि उसको व्यापार दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यसकारण अब विचारधाराको कुनै कुरा छैन। कुरा आफ्नो– आफ्नो राष्ट्रिय हितको हो।
नेपाल र भारतको खुला सिमाना छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा भारतीय र नेपाली नागरिकहरू जाने बाटो एकै ठाउँ छ, अरुका लागि फरक छ। हामी एकै हौं जस्तो देखिन्छ। कुराकानीले सबैले। यो अन्त्य हुनुहुँदैन। तर पटक पटक आशंका हुने गरेको छ, यस्तो रिपोर्ट छ की पाकिस्तानको खुफिया एजेन्सी आइएसआईले नेपालमा लगानी गरिरहेको छ। खास गरी तराईमा। के तपाईसँग कुनै त्यस्तो योजना छ जुन भारतविरोधी गतिविधिहरू नेपालमा संचालित नहोस् ?
तपाईं लामो समय भूमिगत भएर जङ्गलमा रहनु भयो। तपाईलाई त्यो अवधिमा कुनै त्यस्तो कठिनाइ त भएन, जस्तो मन्डेलाको आँखाको ज्योतिमा समस्या थियो। त्यस्तो कुनै समस्या भएन?
(लाइभ हिन्दुस्तान डटकममा भदौ २६, २०७३ (सेप्टेम्बर ११, २०१६) आइतबार प्रकाशित अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश)
प्रकाशित २६ भदौ २०७३, आइतबार | 2016-09-11 14:38:17